अष्ट्रेलियाबाट बेलायतको लागि कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
के तपाईं ब्रिटेनमा आफ्नो अस्ट्रेलियाको गाडी आयात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
हामी अस्ट्रेलियाबाट निर्यात, ढुवानी, भन्सार निकासी, बेलायत इनल्यान्ड ट्रकिंग, अनुपालन परीक्षण र डीवीएलए दर्ता सहित तपाईंको कार आयात गर्नका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ह्याण्डल गर्न सक्दछौं। हामी तपाईको समय, परेशानी र अप्रत्याशित लागतहरू बचत गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ह्याण्डल गर्दछौं।
हामीलाई किन अस्ट्रेलियाबाट तपाईंको गाडी आयात गर्न छनौट गर्नुहोस्?
अष्ट्रेलियाबाट आएका गाडीहरूका लागि हामी तपाईको तर्फबाट ढुवानी गर्न सक्दछौं। यसले तपाईंको सवारी-समुद्री ढुवानी, लोड, र अनलोडि ofको तालिका समावेश गर्दछ।
सीमा शुल्क निकासी (NOVA)
भन्सार क्लियरेन्स प्रक्रिया र तपाईंको गाडी खाली गर्नका लागि आवश्यक कागजी कार्यहरू तपाईंको गाडीले कुनै अतिरिक्त भण्डारण शुल्क नलाग्ने सुनिश्चित गर्न आफैंले ह्यान्डल गर्छ।
रसद (सडक ढुवानी)
सवारी साधनको आयातको प्रत्येक चरणको बखत, हामी तपाईको तर्फबाट सम्बद्ध सबै आन्तरिक रसदहरू व्यवस्थित गर्नका लागि छौं कुनै ढिलाइ नभएको सुनिश्चित गर्न।
परिमार्जन र परीक्षण
वाहन संशोधित र युनाइटेड किंगडममा अनुपालनको लागि आफैद्वारा परीक्षण गरिएको छ। जस पछि सबै प्रासंगिक परीक्षण onsite हाम्रो निजी स्वामित्व वाली IVA परीक्षण लेन मा गरीएको छ।
दर्ता आवेदन `
एक पटक तपाईंको अस्ट्रेलियाको सवारी अनुरूप भएपछि हामी तपाईंको गाडीलाई युनाइटेड किंगडममा दर्ता गर्न आवश्यक सबै कागजहरूको ख्याल राख्छौं र स collected्कलन वा डेलिभरी गर्न सकिन्छ।
अस्ट्रेलियाबाट बेलायतमा कारहरू आयात गरेको वर्षदेखि, हामीले ध्यानपूर्वक कार शिपिंग विशेषज्ञहरू छनौट गरेका छौं जसले अष्ट्रेलियामा सबै प्रमुख बन्दरगाहहरूबाट सञ्चालन गरिरहेका छन् हाम्रो ग्राहकको कारहरू ह्यान्डल गर्न।
हामी ब्रिस्बेन, सिड्नी, मेलबर्न र पर्थको सहरको सीमाभित्र नि:शुल्क सङ्कलन प्रस्ताव गर्छौं तर तपाईंको अनुरोधमा अष्ट्रेलियाको अगाडिबाट तपाईंको गाडी सङ्कलन गर्न उद्धरण थप्न सक्छौं।
हामी सामान्यतया साझा कन्टेनरहरूको प्रयोग गरेर सवारीहरू पठाउँदछौं, यसले तपाईंलाई युकेनमा तपाईंको गाडी आयात गर्नका लागि कम दरबाट लाभ लिन मद्दत पुर्‍याउँछ किनभने ग्राहकहरूको तर्फबाट आयात गरिरहेका अन्य कारहरूसँग कन्टेनरको लागत साझेदारी गर्दा।
कन्टेनर ढुवानी युकेमा तपाईंको गाडी आयात गर्ने सुरक्षित र सुरक्षित तरिका हो र प्रायः सबैभन्दा लागत-प्रभावी हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको गाडी को लागी एक समर्पित 20ft कन्टेनर चाहानुहुन्छ भने कृपया सोध्नुहोस्, किनकि हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई पनि यो आपूर्ति गर्दछौं।
बेलायतमा तपाईको अष्ट्रेलियाको गाडी आयात गर्न तपाईले कति कर तिर्नु पर्छ?
जब अष्ट्रेलियाबाट सवारी साधन आयात गर्नुहुन्छ, त्यहाँ युकेमा भन्सारहरू खाली गर्न चार अलग अलग तरिकाहरू छन्, सवारीहरूको उत्पत्ति, उमेर र तपाईंको परिस्थितिहरूको आधारमा:
यदि तपाईंले EU बाहिर निर्मित सवारी साधन आयात गर्नुभयो भने, तपाईंलाई 20% VAT र 10% शुल्क लगाइनेछ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईंले EU भित्र निर्मित गाडी आयात गर्नुभयो भने, तपाईंले 20% VAT र £ 50 शुल्क तिर्नुपर्छ।
यदि तपाईंले 30 वर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधन आयात गर्नुभयो र व्यापक रूपमा परिमार्जन गरिएको छैन भने, तपाईंलाई मात्र 5% VAT चार्ज गरिनेछ।
के तपाईं संयुक्त अधिराज्यमा ट्रान्स्फरिंग निवासीको रूपमा फिर्ता सर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईंसँग months महिना भन्दा बढि गाडी छ र अष्ट्रेलियामा १२ बर्ष पछि पुग्ने रेसिडेन्सी छ भन्ने प्रमाण छ भने - त्यसो भए तपाईंको आयात प्राय जसो अवस्थामा आयात शुल्कहरू र करहरूको अधीनमा हुँदैन।
अष्ट्रेलियाई वाहन संशोधन र प्रकार अनुमोदन
दश वर्षभन्दा कम उमेरका सवारीहरूका लागि, युकेमा आइपुगेपछि, तपाईंको गाडीले यूके प्रकारको स्वीकृतिको पालना गर्नुपर्नेछ।
हामी यो IVA परीक्षण प्रयोग गरेर गर्छौं। हामीसँग UK मा एक मात्र निजी रूपमा संचालित IVA परीक्षण सुविधा छ, यसको मतलब तपाईंको गाडी सरकारी परीक्षण केन्द्रमा परीक्षण स्लटको लागि पर्खिनेछैन, जुन प्राप्त गर्न हप्ताहरू लाग्न सक्छ, यदि महिनौं लाग्न सक्छ। हामी प्रत्येक हप्ता साइटमा IVA परीक्षण गर्छौं र यसैले तपाईको कार दर्ता गर्न र युके सडकहरूमा छिटो टर्नअराउन्ड छ।
प्रत्येक कार फरक छ र प्रत्येक निर्मातासँग आयात प्रक्रिया मार्फत आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि विभिन्न समर्थन मापदण्डहरू छन्, त्यसैले कृपया उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंको परिस्थितिको लागि अधिकतम गति र लागत विकल्पमा छलफल गर्न सक्छौं।
अस्ट्रेलियाको कारहरूलाई केहि परिमार्जनहरू आवश्यक पर्दछ, MPo रिडिंग प्रदर्शन गर्न स्पीडो सहित र रियर फोग प्रकाश स्थिति यदि यो पहिले नै विश्वव्यापी रूपमा सुसंगत छैन भने।
हामीले आयात गरेका सवारी साधनहरूको मेक र मोडेलहरूको विस्तृत क्याटलग निर्माण गरेका छौं जसले गर्दा तपाईंको कारलाई यसको IVA परीक्षणको लागि तयार हुन के चाहिन्छ भन्ने सही अनुमान दिन सक्छ।
10 वर्ष भन्दा पुराना कारहरू प्रकार अनुमोदन छूट छन् तर अझै पनि एक सुरक्षा परीक्षण आवश्यक छ, MOT भनिन्छ, र दर्ता हुनु अघि IVA परीक्षणमा समान परिमार्जनहरू। परिमार्जनहरू उमेरमा निर्भर हुन्छन् तर सामान्यतया पछाडिको फग लाइटमा हुन्छन्।
यदि तपाईंको गाडी 40 वर्ष भन्दा पुरानो छ भने यसलाई MOT परीक्षणको आवश्यकता पर्दैन र दर्ता हुनु अघि सिधै तपाईंको युके ठेगानामा डेलिभर गर्न सकिन्छ।
यूके फर्किँदै छ
के तपाई अस्ट्रेलियाबाट स्थानान्तरण गर्ने निवासी हुनुहुन्छ?
धेरै संख्यामा व्यक्तिहरूले स्थानान्तरण गर्दा प्रस्ताव गरिएको कर-मुक्त प्रोत्साहनको फाइदा उठाउँदै अष्ट्रेलियाबाट आफ्ना सवारी साधनहरू फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्छन्।
हामी गाडीको देखभालमा सहयोग गर्न सक्दछौं जहाँ तपाईं सर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यदि तपाईंले उही समान कन्टेनरमा तपाईंको गाडीको साथ तपाईंको व्यक्तिगत सामानहरू ढुवानी गर्न छनौट गर्नुभयो भने हामी तपाईंको तर्फबाट स collect्कलन गर्न पनि हौं।
घर TOR विशेषज्ञ मा समर्पित संग, हामी तपाईं निवास को स्थानान्तरण को लागी तपाईंको आवेदन संग मद्दत गर्न सक्दछ यदि तपाईंसँग कुनै समस्या छ।
तपाईको गाडी दर्ता गराउन चिन्ता गर्नु भनेको हामी तपाईको लागि सजिलो प्रक्रिया बन्न चाहान्छौं। TOR प्रक्रियाको बारेमा कुनै पनि प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सम्पर्कमा आउन नहिचकिचाउनुहोस्।
निवास स्थानान्तरण राहतको बारेमा थप जान्नको लागि तलको लिङ्क जाँच गर्नुहोस्!